Jiri matarasị nke ọma na mmiri mmiri iji mee ka azụmahịa gị dịkwuo mma
Nwere ike ijikọ ihe ruru 3 USB mpụga na Heredia Q5. Site na ọdụ ụgbọ mmiri 3 USB, gbakwunyere Drive Drive site na Njikọ Sata. Ihe ngwungwu a nwere tata eriri, nke bu ihe nlere anya dika eleghi anya enwere ike inwe tasble table table.
Ka m na-etolite, amụtara m na ụlọ akụ nke ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ bụ $ 25 ruo $ 50.mary afọ Dị ka ndị na-atọ ụtọ dị ka ihe ngosi. 'T ụlọ akụ na-echekwa ego? Ndị a na-achọkarị nke ọma. A na-eme ụlọ akụ na-eme nke ọma bụ Batch Bartreuut 1875 n'ime ha, ndị kachasị ewu ewu na-ewu ewu.
Kedu maka ụfọdụ mmelite dị mma na ọganihu ụlọ a na-ewu ewu - fillers a dị mkpa. Ogologo oge tupu isi nwa nwa nwa nwoke ga-eme n'ọdịnihu na-adabara Charles P \_ "Shrog \_" Rogers akwa? Onye na-eme ihe nkiri adịghị mma maka ịsụgharị ma na-ele TV. Atụrụ m anya na A & P na-ezube itinye nnukwu ohiri isi na ya maka ntụnye aka.